अमेरिकामा एकै परिवारका ३ जनाको यस्तो दु:खद्पूर्ण मृ’त्यु ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियअमेरिकामा एकै परिवारका ३ जनाको यस्तो दु:खद्पूर्ण मृ’त्यु !
अमेरिकामा एकै परिवारका ३ जनाको यस्तो दु:खद्पूर्ण मृ’त्यु !
अमेरिकामा आएको आँ’धी र वर्षाका कारण एकै परीवारका ३ जनाको मृ,त्यु भएको छ । न्यूयोर्कमा आएको ‘आइडा’ नामक आँ’धीमा परेर उनीहरुको ज्यान गएको युनाइटेड शेर्पा एशोसिएसन यूएसले जनाएको छ ।
पछिल्लो केही दिनयता अमेरिकाको विभिन्न राज्यहरुमा भारी वर्षासँगै आँधीका कारण ठूलो मात्रमा धनजनको क्षति पुगेको छ ।मृ,त्यु हुनेहरुमा सोलुखुम्बु जिल्ला दुधकुण्ड नगरपालिका वडानं २ जुनवेशी घर भइ हाल न्यूयोर्कमा बस्दै आएका आङ गेलु लामा उनकी श्रीमती मिङमार शेर्पा र उनीहरुको १९ महिनाको छोरा लोप्साङ लामाको मृ,त्यु भएको हो।
न्यूयोर्क शहरको उडसाइड क्विन्समा बस्दै आएका एकै परिवारका ३ जनाले आफू बसेको भूंईं तलामा पानी भ’रिंदा त्यहां क’रेन्टसमेत प्र’वाह भए पछि ज्यान गु’माएको बताइएको छ। ज’नजाति महासंघ, अमेरिकाका अध्यक्ष लोक चेम्जोङ्गले भने,‘ पानीको व’हावसंगै क’रेन्ट पनि प्र’वाह भएपछि उहाँहरु भाग्न अ’समर्थ हुनुभएछ।’
आफू बसेको बे’समेण्टमा पानी भरिएपछि नि’स्कने प्रयास अ’सफल हुँदा उनीहरुको ज्यान गएको हो ।यो घटनाको विस्तृत विवरण अझै आइसकेको छैन। आँधी र वर्षाका कारण मत्रै त्यहाँ ६८ को मृ,त्यु भइसकेको छ । केही नागरिकहरु बाढीको चपेटामा परेका कार र भवनको सबैभन्दा मुनिको तलामा फ’सेका छन् ।
समुद्री आँधी आ’इडाका कारण त्यहाँ अहिलेसम्मकै उच्च वर्षा हुँदा बाढी आएको हो ।तीन दिनअघि अमेरिकी राज्य लुजियानामा आइडा आँधी प्रवेश गरेको थियो। उक्त आँ’धीका कारण लुजियानामा ठूलो भौतिक र मा’नवीय क्षति भएको थियो।
न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार कमजोर भइसकेको ठानिएको त्यही आँधीको प्रभावले बिहीबार उत्तरपूर्वका न्युयोर्क, न्युजर्सी, पेन्सलभेनिया र कनेक्टिकट राज्यमा अचानक भीषण वर्षा भएको थियो। अ’चानक भएको वर्षाले घरका भुइँतलामा पानी भरिएको थियो भने सडकहरू नदीजस्ता भएका थिए।
ज्यान गु’माउनेहरूमा धेरैजसो भुइँतलामा बसेका र सवारी साधन चलाइरहेका मानिसहरू छन्। बाढीमा केही कारहरू बगेका छन्। वर्षासँगै आएको चक्रवातले केही घरका छाना पनि भ’त्काइदिएको छ। बाढीपछि न्युयोर्क सहरमा सबवे ब’न्द गरिएको छ दर्जनौं उडान स्थगित भएका छन्।
बिजुली अवरूद्ध भएपछि ती राज्यहरूमा जनजीवन अ’स्तव्यस्त भएको छ। देशको पूर्वोत्तर भाग अ’चानकको बाढी र आँधीबेहरीको चपेटामा परी ४५ जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले जलवायु परिवर्तन स’ङ्कटसँग जुझ्नका निम्ति “ऐतिहासिक लगानी” आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
उनले अहिले अमेरिकाले देशैभरि ज’लवायुसम्बन्धी स’ङ्कट भोगिरहेको र त्यसको सामना गर्नु भनेको “जीवन वा म’रणको सवाल भएको” बताएका छन्। न्यूयोर्क र न्यूजर्सी राज्यमा अस्वाभाविक वर्षा देखिएको छ। केही बासिन्दाहरू बाढीको चपेटामा परेका कारहरू र भवनहरूका सबैभन्दा मुनिको तलामा फ’सेका छन्। समुद्री आँधी आ’इडाका कारण त्यहाँ अहिलेसम्मकै उच्च वर्षा भएपछि त्यस्तो विपद् देखा परेको हो।
६७औं राष्ट्रिय फिल्म अवार्डमा मनोज, कंगना र धनुष उत्कृष्ट
‘शाहरुख खान भारत छोड्नुहोस्, परिवारसँगै पाकिस्तान आउनुहोस्’: पाकिस्तानी कार्यक्रम प्रस्तोता
सिंगापुरले नेपालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटायो
आर्यन खानले भने– ‘मलाई फसाइयो’
सिड्नीमा श्रीमानको ह,’त्यामा नेपाली युवतीलाई ३ वर्ष जे’ल सजाय, युवतीले ५ पटकसम्म ग’र्भपतन गरेको खुलाशा